Usoro ọmụmụ, ọrụ na ọdịnaya n'efu ga-aga kwarantaini | Akụkọ akụrụngwa
Usoro ọmụmụ, ọrụ na ọdịnaya n'efu ga-aga kwarantaini
Ụlọ Ignatius | | Aplicaciones, gụgharia, Videogames
Ka ụbọchị nke ụlọnga na-aga, ọ na-esiwanye ike ọ bụghị naanị ịchọta ntụrụndụ maka ụmụaka, kamakwa maka onwe anyị. Ọ dabara nke ọma, ịntanetị na-enye anyị usoro nke akụrụngwa n'efu, ọrụ ndị free anyị chịkọtara n'isiokwu a.
Mana ọ bụghị naanị na anyị gosipụtara gị oge dị iche iche nke oge ezumike, kamakwa anyị na-agwa gị maka Ihe ọmụmụ 33 n'efu na Google na-enye anyị ohere anyị, nkuzi ndị na - agaghị enyere anyị aka ịzụ ụbọchị ndị a. Trainingzụ ụmụntakịrị ga-ekwe omume ebe ha na-ekpori ndụ site na akụ anyị na-egosi gị n'okpuru.
1 Usoro Google n'efu 33
1.1 Usoro data na teknụzụ
1.3 Usoro mmepe onwe onye
2 Ihe nkiri, telivishọn na egwu
3 Egwuregwu na ngwa n'efu
4 Mmụta maka ụmụaka
4.1 Onye nkuzi
Usoro Google n'efu 33
Bọchị ndị a nke ịnọ n'ụlọ na ndị Spain niile na-ata ahụhụ, bụ oge magburu onwe ya iji mee ihe ahụ na-adịghị mma, iji gbasaa ọzụzụ ọrụ anyị (ụfọdụ na-enye asambodo gọọmentị) ma ọ bụ naanị iji mụbaa ihe ọmụma anyị. Google na eme ka anyi nwee usoro ihe omumu diri ha, ha nile n’efu, ihe omumu nke anyi nwere ike iji bulie ahia anyi ma obu oru aka anyi.
Usoro data na teknụzụ
Ụdị mgbagwoju anya igwe, nke Schoollọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ Mmepụta mepụtara ma mepụtara na mmekorita ya na Red.es maka Google. Mejupụtara 7 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo.
Agụmakwụkwọ Development Apps. Onye Complutense University nke Madrid kere maka Google. Mejupụtara 8 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo.
Usoro mmeghe nke Web Development: HTML na CSS (1/2). Onye IEI nke Mahadum Alicante mepụtara maka Google. Mejupụtara 5 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo.
Usoro mmeghe na mmepe Web: HTML na CSS (2/2). Onye IEI nke Mahadum Alicante mepụtara maka Google. Mejupụtara 4 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo.
Mata ụkpụrụ nke mmemme. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Mụta ntọala nke mmụta igwe. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Mee ka nchedo ụlọ ọrụ gị dị n'ịntanetị. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Isi nke Digital Marketing. Google mepụtara Mejupụtara 26 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo.
Azụmahịa kọmputa Onye thelọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ Mmepụta mepụtara maka Google nke mejupụtara 8 modul - elekere 40. Gụnyere asambodo.
Ikike dijitalụ maka ndị ọkachamara. Onye Santa María la Real Foundation maka Google mebere ya. Mejupụtara 7 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo.
Ntughari dijitalụ maka ọrụ. Onye thelọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ Mmepụta mepụtara maka Google. Mejupụtara 4 modul - 40 awa. Gụnyere asambodo dijitalụ.
Na-akwalite azụmahịa n'ịntanetị. Google mepụtara Mejupụtara 7 modul - 3 awa.
Mee ka ndị ahịa chọta gị n'ịntanetị. Google mepụtara Mejupụtara 4 modul - 3 awa.
Na-akwado azụmahịa na mgbasa ozi n'ịntanetị. Google mepụtara Mejupụtara 5 modul - 3 awa.
Bupu otu ụlọ ọrụ na mba ndị ọzọ. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Jikọọ na ndị ahịa site na mkpanaka. Google mepụtara Mejupụtara 2 modul - 1 awa.
Na-akwalite azụmahịa na ọdịnaya. Google mepụtara Mejupụtara 4 modul - 3 awa.
Usoro mmepe onwe onye
Nrụpụta Onwe Onye. Onye Santa María la Real Foundation maka Google mebere ya. Mejupụtara 8 modul - awa 4. Gụnyere asambodo.
Nweta obi ike site na ịkwalite onwe gị. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Nweta ọrụ ozo gi. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Mụbaa arụpụtaghị ọrụ. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Okwu Mmalite nke Ọdịmma Dijitalụ. Google mepụtara Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Netwọk Ọkachamara dị Irè. Kere site FutureLearn. Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Nkwukọrịta azụmahịa. Onye Iheoma Mere. Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Kwunye echiche gị site na akụkọ na aghụghọ. Ndi OpenClassrooms kere Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Na-ekwu okwu n'ihu ọha. Ndi OpenClassrooms kere Mejupụtara 1 modul - 1 awa.
Ndị a niile ọmụmụ dị site na njikọ a Google rụọ ọrụ. Anyị kwesịrị họrọ udi otu na anyị na-achọ ka anyị nwee ike ịnweta ya.
Ihe nkiri, telivishọn na egwu
Ogwe. Anyị nwere obere ikwu banyere ọrụ a. Naanị ihe, na dị ka n',tali, ọdịnaya ya niile dị kpamkpam n’efu na Spen.
Rakuten. Free ohere ihe karịrị 100 nkiri na mgbasa ozi, ihe nkiri nke ụdị dị iche iche, maka ụmụaka na ọ bụghị obere.
HBO na-enye ohere ka anyị nweta katalọgụ gị dum n'efu N’ime izu abụọ.
Sky na-enye anyị otu ọnwa free ohere ma ọwa ya ma maka ọdịnaya ọ na-achọ ka ọ dịrị anyị.
YouTube adịchaghị na-enyekwa anyị otu ọnwa free ohere na enweghị mgbasa ozi, ọrụ na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ vidiyo na-enweghị mgbasa ozi, budata vidiyo, gee egwu kachasị amasị anyị site na YouTube Music, kpọọ YouTube na ndabere na ama anyị ...
Movistar + Lite na-aga n'ihu na nkwalite iji dọta ndị ahịa ọhụrụ, nkwalite nke na-enye anyị ọnwa 1 nke nnweta zuru oke na na site na March 24 na-esote, ga-agụnye katalọgụ Disney +.
Egwuregwu na ngwa n'efu
Onye Mmepụta Panda na-enye anyị 5 egwuregwu ya maka obere ụmụ kpamkpam n'efu maka iOS na gam akporo: Dr. Panda Bath Oge (iOS / android), Ulo akwukwo Panda (iOS / Gam akporo), Ulo akwukwo Panda (iOS / android), Dr. Panda na Ohere (iOS / android), Obodo Hoopay (iOS / android) na Dr. Panda na oflọ Dodo (iOS / android)
Abụọ n'ime egwuregwu studio kacha nwee ọganiihu na ụwa nke egwuregwu vidiyo vidiyo, Alto's Odyssey y Alto's Adventure, dị maka n'efu na Apple App Store.
Ọ bụrụ na egwuregwu egwuregwu na-amasị gị, ị nwekwara ike iji ohere a na-enye site na Ironhide egwuregwu studio, ụlọ ọrụ na-enye anyị Alaeze Rush n'ókèala (iOS / android) na Alaeze Rush Origins (iOS / android) n'efu, na ma iOS ma gam akporo.
Mmụta maka ụmụaka
Weebụsaịtị RTVE Clan gbadoro ụkwụ na obere ụlọ, na-enye anyị ngwa agụmakwụkwọ Onye nkuzi, maka ezinụlọ n'oge mmechi nke ebe agụmakwụkwọ ruru coronavirus na ebe anyị na-ahụ ọdịnaya ọdịyo maka ụmụaka site na 3 ruo 10 afọ. Ndi Ministri na akuzi aka na ndi oru aka nwere achikota ihe ndi a.
Ka ụmụaka wee nwee ike ịga n'ihu na-amụ ihe n'ụlọ, Santillana na-enye ndị nne na nna ohere ịnweta usoro mmemme nke elementrị ya iji mee ka imepụta ihe, ịmata ihe na mmekorita. Iji nweta ọdịnaya niile onye nkwusa a na-enye anyị, anyị ga-eji aha njirimara na paswọọdụ ndị a:
Onye ọrụ: santillana
Ọrụ na Spanish
Projects na Eukera
Ọrụ na Catalan
smartick bụ usoro dị n'ịntanet maka ụmụaka iji mụta ma mụta mgbakọ na mwepụ n'ụlọ na-arara naanị 15 nkeji ụbọchị. Ọrụ weebụ a na-enye anyị ụbọchị 15 nke nnweta n'efu ma ezubere maka ụmụaka nọ n'agbata 4 na 14 afọ. Na ngwụcha nke ọ bụla, anyị na-enweta ozi-e na nsonaazụ nke nnwale nke obere, oge etinyekwara, njehie ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Usoro ọmụmụ, ọrụ na ọdịnaya n'efu ga-aga kwarantaini
Egwuregwu kachasị mma kachasị mma iji gafee kwarantaini